Dowladda Shiinaha oo ballan-qaad u samaysay Soomaaliya – Radio Daljir
Dowladda Shiinaha oo ballan-qaad u samaysay Soomaaliya
Maajo 31, 2015 3:41 b 0
Axad, May 31, 2015 (Daljir) — Ra’iisul Wasaaraha Somalia, Cumar C/rashiid Cali oo ay wehliyeen Wasiirka Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Wasiir-u-dowlaha arrimaha dibadda, wasiir-u-dowlaha waxbarashada, wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha, Wasiir ku xigeenka Kaluumaysiga ayaa xafiiskiisa kula kulmay wafti ka socday Shiinaha.
Waftiga ka socda Shiinaha ayaa waxaa hoggaaminayey Liu Guijin oo ah ergayga Shiinaha u qaabilsan Golaha Xiriirka Shiinaha iyo Afrika, iyagoo Qiimeynaya sida ugu Habboon ee Somalia ay uga mid Noqon lahayd Golahaas.
“Xiriirka Shiinaha iyo Somalia wuxuu dib u soo noqday markii la dhisay dowladdan cusub dhamaadka 2012-kii, waxaana labada dal ka dhexeeya xiriir dheer oo soo billowday 1960-kii, Waxaana noo Qorshaysan inaan Soomaaliya ka caawino, dhanka Warshadaha si dadka shaqo loogu abuuro, dib u dhiska iyo nabad kusoo dabaalida dalka oo saldhig u ah inaan Somalia wax badan laga caawiyo, waxaana rajaynaa in Soomaaliya sannadkaan dhamaadkiisa ay kusoo biirto Golaha Xiriirka Shiinaha iyo Afrika, si ay uga fa’iideysato deeqaha iyo daymaha Shiinuhu siiyo Waddamada ka midka ah Golahaan,” ayuu yiri Danjire Liu Guijin
Sidoo kale, RW Sharma’arke ayaa uga mahad-celiyey waftiga Shiinaha booqashada ay ugu kuur-galayaan sidii ay Somalia uga caawin lahaayeen inuu cagaheeda isugu taagi lahayd, dib u dhisna ay ku sameeyaan Goobihii ay Shiinuhu Dhiseen oo bur-burku gaaray.
“Dowladda Somalia waxay ku howlan tahay sidii ay ugu biiri lahayd golaha xiriirka Afrika iyo China, waxaana arrintan diyaarinteeda hormuud ka ah wasaaradeena arrimaha dibadda. Dowladda Shiinaha waxaan ka rajeynaynaa markii aan ka mid noqono Golahan inaan qayb ka helno Mashaariicda ay Shiinuhu ku hormarinayaan Afrika, Waxaana mudnaanta noo leh hormarinta Xoolaha, Kaluumaysiga iyo sidoo kale Waxbarashada,” ayuu yir Sharma’arke.
Ugu dambeyn, Wasiir-u-dowlaha Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Khalid Cali Cumar oo dhankiisa Hadlay ayaa Sheegay in Dowladda Somalia ay Billowday Qaabkii ay uga mid noqon lahayd Golaha Xiriirka Shiinaha iyo Afrika, wuxuuna xusay in Somalia ay ka qayb-galayso Sannadkan dhammaadkiisa shir heer wasiir ah oo ka dhaci doona dalka Koonfur Afrika.
“Waftigan wuxuu qiimaynayaa sidii Somalia ugu biiri lahayd golaha Xiriirka Shiinaha iyo Afrika oo la asaasay sannadii 2000. Golahan wuxuu Taageero Ballaaran ka Gaystaan dib u dhiska Afrika, waxaana la qabtaa saddexdii sanaba mar shir heer madaxweyne ah, waxaana shirkii ugu dambeeyey lagu ballan-qaaday lacag 20-bilyan oo doollar ah oo dalalka Afrika ay ku helaan deeq, deyn aan dul-saar lahayn iyo deyn dul-saarkeedu yar yahay.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Axad 31
Tahriibayaal Afrikaan ah oo laga badbaadiyay badda u Dhaxeysa Talyaaniga iyo Libya